ဘာလို့ အခုအချိန် Staycation သွားသင့်လဲ? - LODGGY
Home » City Guides • Guides » ဘာလို့ အခုအချိန် Staycation သွားသင့်လဲ?
ဘာလို့ အခုအချိန် Staycation သွားသင့်လဲ?
December 17, 2020 Waiyan Min Thant	City Guides, Guides
အခုလိုအချိန်မှာ စိတ်သက်တောင့်သက်သာနဲ့ အေးအေးလူလူ နေနိုင်ဖို့က ခက်တယ်နော်.. လူတစ်ယောက် ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်သက်သာနေတယ်ပြောပြော Covid နဲ့ Lockdown တွေနဲ့ အခုဖြစ်ပျက်နေတာတွေကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ပဲ အဲဒီ့စိတ်သက်သာတယ်ဆိုတာက အပ်ချည်တစ်မျှင်စာပဲဆိုတာသိကြမှာပါ။ (ကိုယ်တိုင်လဲ သိနေတယ်လေ) Facebook ကနေ Memories လေးတွေပဲတက်လာတာဖြစ်ဖြစ်၊ ဖုန်းထဲက ပုံအဟောင်းလေးတွေကြည့်ရင်း ခရီးသွားပုံတွေတွေ့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ခရီးသွားချင်စိတ်လေးတွေ ပေါ်လာမှာပါ့… (ကိုယ်တွေဆိုသွားချင်တာ ဆယ်ပိုင်းလောက်ကိုသေလို့…) ခုလော‌လောဆယ် အဆင်ပြေတာဆိုရင် Staycation လုပ်လို့တော့ ရတယ်လေ။
Staycation ဆိုတာက ကိုယ့် အနီးတစ်ဝိုက်က Hotel/Resort တစ်ခုခုမှာ တစ်ညလောက်ဖြစ်ဖြစ် သွားအနားယူတာပေါ့. ကိုယ်နေနေတဲ့ မြို့မှာပဲ သွားတည်းရမယ်? နေဦးလေ ဘာကြောင့်လဲ ရှင်းပြမယ်လေ….
1. Staycation ဆိုတာက နေရာတွေလျှောက်လည်ဖို့မဟုတ်…
ခရီးထွက်တဲ့အခါကျ ဟိုလဲသွားမယ်၊ ဒီနေရာလဲ ရောက်ချင်နဲ့ အရမ်းကို ဗျာများရတယ်။ ခရီးသွားတယ်ဆိုမှာတော့ နေရာစုံ ရောက်ချင်တာပေါ့လေ..
ဒါပေမဲ့ Staycation ကျတော့ ပြောင်းပြန်။ အေးဆေး နေမယ်၊ Relax လုပ်မယ်၊ သာသာယာယာနားမယ်ပေါ့… တစ်မနက်လုံး အိပ်ယာထဲ အပျင်းကြီးချင်လား၊ ရတယ်လေ… တစ်ညလုံး ကိုယ့် Partner နဲ့ စကားတွေဖောင်ဖွဲ့ချင်လဲ မနက်အေးဆေးအိပ်နေလို့ရတော့ မပူရ။ ညနေကို ရေကူးကန်မှာ Cocktail လေးလက်ထဲကိုင် ခြေစိမ်ရင်း လန်းချင်တာလား.. ရသေးတယ်.. ဟိုသွားရမှာ ဒါလုပ်ရမယ် ဆိုတဲ့ Stress တွေမရှိတော့ဘူးလေ။
Staycation ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြုစုတာပါပဲ။ နားချင်တာ၊ ရေကူး၊ အပျင်းကြီး၊ Spa ပဲသွားသွား ကိုယ် စိတ်တိုင်းကျလေးဖြစ်နေတဲ့ Feel ကို ယူတာပါပဲ။
2. အထုတ်တွေနဲ့လဲ ခေါင်းမရှုပ်ရဘူး…
ခရီးသွားတော့မယ်ဆိုရင် ဟိုပစ္စည်းစစ်ရ၊ ဟို အင်္ကျီလေး ကျန်ခဲ့မှာစိုးလို့အပြေးမှတ်ရနဲ့ ပင်ပန်းရတယ်လေ… (Luggage လုပ်ပေးမဲ့သူမရှိတော့လဲ… 😥) ပိုဆိုးတာက ကလေးတွေပါရင် သူတို့ ပစ္စည်းတွေပါပူရပြန်ရော ဆိုတော့ ကိုယ့်ဘာကိုယ်တောင် အထုတ်မထည့်အားတော့ဘူး…
Staycation သွားမယ်ဆိုရင်ကျ သိပ်ပြီး အလုပ်မရှုပ်ရဘူး။ ကိုယ့်အတွက် တစ်ကိုယ်ရည်ပစ္စည်းလေးတွေ၊ ကလေးတွေကောက်ထည့်၊ အေးဆေးသွားရုံပဲ။ ပစ္စည်းကျန်ခဲ့လား? အေးဆေး အဆင်ပြေတဲ့အချိန်လေး ပြန်ယူလို့လဲ အဝေးကြီးတွေလဲ မဟုတ်။ ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်လဲ…
3. Staycation တွေက ခရီးသွားတာထက်ပိုသက်သာတတ်ပါတယ်…
ဟမ်?? သက်သာတယ်?? ဟုတ်တယ်လေ! လေယာဥ်/ကားလက်မှတ်ဖိုးတွေရော, ဟိုရောက်ရင်လည်ဖို့ ကားငှားရနဲ့ အဲအခကြေးငွေတွေ သက်သာတယ်လေ။ အဲပိုထွက်လာတာလေးကို အခန်းပိုကောင်းတာလေးယူယူ၊ Spa လေးသွားပြီး Massage လေးနဲ့ ဇိမ်ခံတာမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်လေ။ (ကိုယ်ဘယ်လောက် ဇိမ်ခံတာကြိုက်တာ ကိုယ်အသိဆုံးနော်… 🙄) ဒါတင်မက အခုလိုအချိန်မှာ Staycation Deals တွေအများကြီးလဲရှိနေတာဆိုတော့ ပုံမှန်အချိန်တွေအတွက်တော့ တန်နေပြီနော်…
နောက်ဆုံး ဇိမ်ခံတာကြိုက်လွန်းလို့ ကုန်ကျတာ ခရီးသွားတာလောက်ဖြစ်နေရင်တောင် (ကြိုက်လွန်းလို့ဖြစ်တာပဲ ခွင့်လွတ်ရမှာပေါ့…) ကိုယ်စိတ်တိုင်းကျကျလေးဖြစ်၊ လန်းဆန်းသွားတာတဲ့ Feel က ဘာနဲ့မှ လဲလို့မရတာတော့ သေချာတယ်။ ခရီးကပြန်ရောက်သလိုမျိုး ဂျင်လို့ခေါ်ရလောက်အောင် လည်လွန်းလို့ ခရီးပန်းတာတွေပါတွေလဲ မရှိဘူးလေ…
4. Staycation က အချိန်မရွေးသွားလို့ရတယ်…
မိုးရွာ၊ လှိုင်းကြီးနေလို့ ကမ်းခြေသွားလို့မရဘူး??? Staycation က ဒါမျိုးတွေမရှိ.. မိုးရွာနေလား အခန်းထဲမှာ TV လေးကြည့် ဇိမ်ရှိရှိ ကွေးနေလို့လဲရ၊ Café လေးသွားပြီး မိုးစက်လေးတွေ ငေးမလား.. နေအရမ်းပူလို့ Staycation က မလာနဲ့လဲ မတားဘူး… Staycation ဆိုတာ လည်ဖို့ထက် အေးဆေး အနားယူတာပဲလေ…
5. စီစဥ်ရ၊ ပြောင်းလဲရလွယ်တယ်…
ပုဂံကို ၃ ညအိပ် ခရီးသွားတယ်ဆိုပါတော့… လည်လို့မဝ မကျေနပ်သေးဘူးလား? ကား/လေယာဥ်လက်မှတ်က ဝယ်ပြီးသားလေ… ရတယ်ဆိုရင်တော့ အင်္ကျီလှလှတွေ ရှိတော့ဘူးလား? ၁ ရက်ပိုနေလိုက်တော့ ခရီးပိုပန်းပြီး အလုပ်ပြန်တတ်တော့ နုံးနေလား? Staycation ဆိုရင် ဒါတွေက စိတ်မပူရဘူးလေ. (ရိုးရိုးလေးပဲစီစဥ် ရိုးရိုးလေးပဲကောင်းတာပေါ့နော…)
Staycation လုပ်နေတုန်း ထပ်နေချင်သေးလား? အခန်းလေး ရက်တိုးလိုက်ရုံပဲ၊ ၁ ရက်ပိုနေလို့ နောက်နေ့ အလုပ်ကျ ပင်ပန်းနေတာလဲမရှိ အင်္ကျီလှလှတွေ ရှိတော့ဘူးဆိုရင်တောင် ဟိုနေ့က သိပ်မဝတ်ဖြစ်တာလေးပြန်ဝတ်လို့ လာပြောမဲ့သူတွေလဲ ရှိဘူးနော်… (Facebook မှာ တစ်နေ့တစ်မျိုး ပုံတင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ သိဘူးနော်…)
ကဲ, အခုအချိန်မှာ Staycation က ဘာလို့ အရမ်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာပြောပြီးပြီဆိုတော့ ဘယ်တော့ ဘယ်မှာသွားတည်းတော့မှာလဲ???
← Why you should go onaStaycation now?
နှစ်ပေါင်း (၁၀၀)တိုင်အောင် ကိုလိုနီခေတ်နှောင်းဗိသုကာလက်ရာတွေနဲ့ အသက်ဝင်နေဆဲ ဝက်မစွတ်ကျောင်း~ →